हाम्रो शरीरमा भिटामिन `डी´ काे अभाव हुँदा देखिने यि पाँच संकेत, सबैले जान्नु अति आवश्यक ! | स्वास्थ्य जीवनशैली
May 27, 2021 May 27, 2021 NepstokLeaveaComment on हाम्रो शरीरमा भिटामिन `डी´ काे अभाव हुँदा देखिने यि पाँच संकेत, सबैले जान्नु अति आवश्यक !
हाम्रो शरीरमा भिटामिन `डी´ काे अभाव हुँदा देखिने यि पाँच संकेत, सबैले जान्नु अति आवश्यक ! मानव शरीरलाई भिटामिन डीले धेरै फाइदा गर्छ तर, कतिपयमा यो भिटामिन अपुगका कारण विभिन्न समस्य हुने गरेको छ । अध्ययनहरूले पनि विश्वका धेरै मानिस यो भिटामिनको अभावमै बाँचिरहेको देखाएको छ । शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा पर्याप्त नहुँदा धेरै प्रकारको रोगबाट पी-डित हुनुपर्छ ।
फोक्सो बलियो बनाउन र शरिरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक राख्न यस्ता चिज खानुहोस् ।